Vanhu veAmerica havafungi kuti dambudziko rakaipisisa rapera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Vanhu vekuAmerican havafungi kuti dambudziko rakaipisisa rapera
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • dzidzo • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Vanhu vekuAmerican havafungi kuti dambudziko rakaipisisa rapera
Kuvimba kwevaAmerican kuti kwakanyanya kwedenda rekonavirus kwapera kwadzikira kusvika pa23%.
23% yevaAmerica vanoti denda rakaipisisa reCOVID-19 rapera.
74% yevaAmerica vanotsigira vakapfeka mamask muzvikoro.
75% yevaAmerica vanotsigira kupfeka masiki munzvimbo dzeruzhinji.
Mhedzisiro yesarudzo ichangobva kuburitswa yenyika inoratidza kuti kuvimba kwevaAmerican kuti chirwere chakakomba checoronavirus chapera kwadzikira kusvika pa23% ichipinda mukudonha kwa2021 zvichienzaniswa nekupinda zhizha 2021 (53%) seyakanyanya kutapurirana Delta.
23% YAMAMERICAN YAKATAURA KUTI KUSVIRA KWEKORONAVIRUS PANDEMIC YAKAPEDZA (ZVINODA KUSVIRA 52% MUNA JUNE 2021 NA 25% MUNA FEBRUARY 2021)
Vakapindura vakabvunzwa kana ivo tenda kuti dambudziko rakaipisisa rapera. Pakazara, 23% yevakabvunzwa vakati hongu, iyo inoteedzera zvakanyanya kudzika kupfuura 53% muna Chikumi 2021 uye 25% muna Kukadzi 2021 kuburikidza nesarudzo dzenyika. Vapinduri vane makore 18-29 vanotenda kuti chakaipisisa chapera pamwero wakakwira (27%) pane vakapindura vane makore makumi matanhatu zvichikwira (60%). Vanhurume vanotenda kuti chakashata chapera pamwero wakakwira (18%) kupfuura vakadzi (30%). Vakapindura vane chivimbo chepamusoro-soro chekuti chirwere chakaipisisa checoronavirus chapera maRepublicans (17%), vachiteverwa neveIndependent (36%) uye maDemocrats (23%).
72% YEMAERIKA ANOGONESESA VADZIDZISI VAZVI 12 TO 18 VANowana
Vanhu vekuAmerican vakabvunzwa kana vaizokurudzira vechidiki vane makore gumi nemasere kusvika gumi nemasere kuti vabaiwe jekiseni nemushonga unobvumidzwa weDAA. 12% yevakapindura vakati hongu. 18% yevaDemocrat vakati hongu. 72% yeVanozvimirira / Vamwe vakati hongu. 90% yevaRepublican vakati hongu.
74% yevaAMERICAN VANOBATSIRA KUPfeka MASKI MUZVIKORO KUTI VADZIDZE KUPARIRA KWECORONAVIRUS
Vakapindura vakabvunzwa kana vachitsigira kupfeka masiki muzvikoro kudzikisira kupararira kwecoronavirus. 74% yevakapindura vakati hongu. 92% yevaDemocrat vakati hongu. 71% yeVanozvimirira / Vamwe vakati hongu. 50% yevaRepublicans vakati hongu.
75% YAMERICAN VANOTSIGIRA KUPfeka MASKI MUNZVIMBO ZVEVANHU KUTI ZVIDZIDZE KUPENYUKA KWECORONAVIRUS
Vakapindura vakabvunzwa kana vachitsigira kupfeka masiki munzvimbo dzeruzhinji kudzikisa kupararira kwecoronavirus. 75% yevakapindura vakati hongu. 92% yevaDemocrat vakati hongu. 72% yeVanozvimirira / Vamwe vakati hongu. 52% yevaRepublican vakati hongu.